Matipi uye Matipi eKutsamwa Shiri 2 | IPhone nhau
Mutambo mutsva waRovio pamusoro peshiri dzakatsamwa zvakare wakabudirira. Shiri Dzinotsamwa 2 inochengeta mutambo mumwechete seyakafanotangira, asi panguva ino Rovio yaita basa rayo rechikoro maererano nemifananidzo uye kusimba kwemutambo, zvichiratidza kuti iwe unogona kuita zvakafanana asi zvirinani. Shiri Dzine hasha 2 mutambo wepachena asi dzimwe nguva unombomira uchifanira kuenda mukutenga-mukati-app kuti ufambire mberi, kana kumirira nemoyo murefu kuti nguva yakatarwa ipfuure kuti uenderere mberi nemutambo. Tinokuratidza mamwe matipi uye manomano anogona kukubatsira kurova mutambo zviri nyore.
1 1. Shandisa shamwari dzako dzepaFacebook
2 2. Pedzisa matambudziko ako ezuva nezuva
3 3. Sangana neshiri
4 4. Usapedze zvitsinga
5 5. Wona zviziviso
6 6.Fambisira mberi wachi
1. Shandisa shamwari dzako dzepaFacebook
Freemium mitambo inoda vezvenhau. Kune dzimwe shamwari iwe unokurudzira kutamba Angry Shiri 2 kuwedzera pamwe anogona sosi yemari yeRovio, uye iye anokutenda nemubairo uyo unoita kuti mutambo uve nyore kwauri. Mune Angry Shiri 2 iwe unowana nguva nenguva zvipo zvaunogona kupa kune vako Facebook shamwari kuti varidze, uye zviri pachena shamwari idzi dzinozokupa zvipo zvavo kana vazviwana. Kunyanya kukosheswa shamwari dzako kumutambo, zviri nani kwauri.
2. Pedzisa matambudziko ako ezuva nezuva
Shiri Dzinotsamwa 2 haidi kuti iwe utambe kwemaawa nemaawa, asi zvinodaro kuti iwe ugare uchigara uye uchitamba zuva nezuva. Kupedzisa matambudziko ezuva nezuva hakuna kuomarara, uye ine mibairo yakanaka muchimiro chematombo ayo achabatsira kwazvo kufambira mberi mumutambo. Usatambise izvo zvichave zvichinyanya kukosha sezvaunofambira mberi.
3. Sangana neshiri
Hunhu hwese muAngry Shiri 2 ine kugona kwavo kunovasiyanisa kubva kune vamwe. Haisi kungodhonza chipfuramabwe uye chinangwa. Kushandisa hunyanzvi nemazvo uye kuziva iyo shiri yekushandisa chero nguva yakatarwa zvichienderana nezvamunofanira kuparadza zvakakosha, uye kune izvi zvakanaka kuti iwe utarise mavhidhiyo ayo hunhu akaunzwa kwauri. Kana iwe uchida kuvaona, iyo Shiri Dzinotsamwa YouTube chiteshi inosanganisira ivo vese.
4. Usapedze zvitsinga
Zvitsinga hazvisi nyore kuwana, saka chinhu chakanakisa ndechekuti uvaponese paunenge wanyatsoomerera uye haugone kufambira mberi padanho. Pamusoro pezvo, chitsinga chega chega chakasiyana saka zvakakosha kuti iwe uzive zvinoitwa neumwe neumwe.
Dhadha regoridhe rinobatsira kana iwe watoparadza zvivakwa uye uchida kutsvaira zvese zvasara
Iyo chando spell inobvumidza Bhuruu kuti ipfuure nenzira dzakasiyana siyana
Iyo inopisa chili spell inokutendera iwe kurwisa imwe yenguruve, saka chengetera kune avo ari munzvimbo dzisingasvikike.
Iyo inflator spell inobatsira kunguruve munzvimbo dziri padyo, nekuti sezvavanokura muhukuru ivo vachaputika.
Iyo ine simba yegondo huroyi inouraya zvese zviri pachiratidziri, saka zvakanakisa kuishandisa pakutanga kwenzvimbo kuitira kuti kukuvara kuve kwakakura.
5. Wona zviziviso
Kamwe mune imwe nguva zvakakosha ona shambadziro kuti ugone kupasa nhanho iyo iwe yamhanya nayo shiri. Zvirinani kutsungirira masekondi mashoma ekushambadzira pane kushandisa matombo kana kurasikirwa neupenyu. Kushambadzira zvakare kunokupa iwe mibairo iyo inobatsira zvakanyanya. Zvishongedze nemoyo murefu uye zvirinani kunakirwa nezviri mukati.
6.Fambisira mberi wachi
Hunyanzvi hwekushandura wachi kuenda kumberi hwakare sezvahunoshanda. Iwe unofanirwa kumirira maawa mashoma kuti uenderere mberi nemutambo? Zvakanaka, enda kuZvirongwa zve iPhone yako kana iPad, uye mukati General> Zuva uye Nguva iwe unogona kugadzirisa iyo nguva yeyako mudziyo. Kamwe kana chinangwa chazadzikiswa, usakanganwa kuseta iyo chaiyo nguva zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Matipi uye manomano kune Anotsamwa Shiri 2